प्रकाशित 15.08.2017 18.09.2018
चरणमा पेन्सिलको साथ केटी कसरी खिच्ने?
कि केटी आकर्षित हामी तल विस्तृत चरणहरू प्रयोग गर्नेछौं। पहिले हामी टाउको र शरीर लाई रूपरेखा दिन्छौं, कपाल र आँखा कोर्दछौं (कुनै पनि अनुहारको अभिव्यक्ति छनौट गर्न सकिन्छ), त्यसपछि यसलाई व्यक्तिमा परिवर्तन गर्नुहोस्, पाखुरा र खुट्टाहरू पूरा गरिसकेपछि, तपाईं आफ्नो स्वादका लागि लुगाहरू पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, तर एउटा झुण्डोमा लुगा लगाएको केटीको उदाहरण प्रयोग गरेर। रेखाचित्र समाप्त भएपछि, हामी यसलाई आफ्नो विवेकमा रंग्दछौं। सबै कुरा यत्ति जटिल छैन जस्तो देखिन्छ पहिलो नजरमा।
परिणाम एक प्यारी ठूलो आँखाहरू सानी केटी थियो।
यो सबै कुन खास anime केटी तपाईं कोर्न को लागी निर्भर गर्दछ। किनभने यस कलाका विधाहरू, र, फलस्वरूप, प्राविधिक पनि धेरै नै हो। तर मैले धेरै नायिका फेस गर्नका लागि मास्टर क्लासको सानो चयन गरे।
मलाई एक anime केटी ड्रई on मा यो ट्यूटोरियल साँच्चै मन प .्यो। यो सत्य हो कि म मेरो आँखा एकै तरीकाले तान्न सक्छु भनेर पक्का छैन - यो मलाई ड्राइ theको यो अंश धेरै जटिल छ जस्तो देखिन्छ। तर सामान्यतया, मलाई चित्र को लागी मन पर्यो।
ठीक छ, यहाँ मूल फोटो छ जहाँबाट यो दृश्य पाठ पेन्सिलको साथ सिर्जना गरिएको हो:
म anime केटी चित्र को एक भिडियो हेर्न सुझाव दिन्छ।
एनिमे जापानी ड्रइ ofको टेक्निक हो। अनुहारको आकार सधैं संकुचित चिनको साथ आयत जस्तै देखिन्छ, एनिमेमा आँखा सँधै ठूला हुन्छन्। शुरुआतीहरूको लागि (प्रशिक्षणका लागि) सुरुमा कन्टूर बनाउनु राम्रो हुन्छ, र शरीरका अ parts्गहरू आयतको रूपमा चित्रण गर्नु (यी भागहरूसँग मिल्दोजुल्दो)।
एक anime केटी को रेखाचित्र धेरै सरल छ र केहि मिनेट लिन। विशेष गरी यदि त्यहाँ एक पछि अर्को निर्देशन छ भने। एनिमे वर्णहरूको ठूलो आँखा छन्, यो महत्त्वपूर्ण छ। कागज, पेन्सिल र इरेज़रको साथ आफैंलाई हात राख्नुहोस् र सुरु गर्नुहोस्। हामी यस्तो राम्रो केटी कोर्नेछौं।
हामी चित्रहरू सहायक स्केचको साथ सुरू गर्दछौं। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, केटीको ठूलो टाउको र सानो शरीर छ। तसर्थ, हामी ठूलो घेरा र गोलाकार कोर्दछौं।
हामी गोलाकार टाउकोको आकार दिन्छौं, त्यसमा रेखाहरू चिन्ह लगाउँदछ, जुनको स्तरमा त्यहाँ आँखा, नाक, र मुख हुनेछ।
सर्तमा खुट्टा, हतियारहरू चिन्ह लगाउनुहोस्।
हामी ठूला आँखा तान्दछौं।
अर्को कपाल छ
हामी मुख पूरा गर्छौं, लुगाको रूपरेखा।
विस्तृत रूपमा पोशाक कोर्नुहोस्।
हामी अनुहार र हात, खुट्टा कोरे।
हामी थप लाइनहरू हटाउँछौं।
केटी रंगको लागि तयार छ।
हामीले केटीलाई चरणमा आकर्षित गर्नु पर्छ। निर्माणको चरणहरू यी तथ्या in्कहरूमा देखाइएको छ।
अवश्य पनि, सबै कुरा तत्काल काम गर्दैन। अभ्यास र अभ्यास। ध्यानपूर्वक प्रस्तुत चरण-दर-चरण निर्देशनहरू र प्यारा केटी एनिमेस्का दोहोर्याउनुहोस् जुन तपाईं सफल हुनुहुनेछ।
यी प्राणीहरू यति विशाल आँखाहरू छन् ... यस्तो देखिन्छ कि जापानीहरूले यसको बारेमा केही प्रकारको जटिल अनुभव गरिरहेका छन्। ओह राम्रो छ। हामी कागज र पेन्सिल लिन्छौं। हामी सामान्य समोच्च रूपरेखा।
आँखाहरू (तिनीहरू बिना कहाँ?) र हातहरू। र एक धनु। र सबै बाँकी
उनी कुनै कुराबाट निराश देखिन्छन्।
केटी चरणमा मा आकर्षित गर्न? यो गर्नका लागि हामीलाई कागजको पाना, पेन्सिल र इरेजर चाहिन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण - एक विस्तृत ड्राइंग योजना। म तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछु:
केटीको अनुहारको चरणबद्ध रेखाचित्रको साथ अझ विस्तृत रेखाचित्र:
हामी यहाँ विस्तृत योजना हेर्छौं।
पेन्सिलका साथ चित्र बनाउन, तपाईंले तलका चित्रहरू हेर्नु पर्छ र सबै चरणहरू दोहोर्याउनु पर्छ।
हामी भविष्यको तस्वीर को आधार कोर्न:
ठुलो विवरण जोड्नुहोस्:
र अब हामीले सबै लुगाहरू सक्यौं, र केटी तयार छ:
यहाँ अर्को विकल्प छ, कसरी केटीलाई कसरी आकर्षित गर्ने, यो सायद सजिलो विकल्प हो, बच्चाले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ। हामी क्रमशः रेखाचित्रमा आवश्यक विवरणहरू पूरा गर्दै, टाउकोबाट केटी तान्न थाल्छौं। यो एक धेरै राम्रो केटी बाहिर बारी छ।
पोस्ट कला र संस्कृति
20 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,420 प्रश्नहरू।